Umfazi weSagittarius-Iimpawu zeZodiac kunye noBuntu ngothando, ukuhambelana kunye nobomi! - Iimpawu Zezodiac
Umfazi weSagittarius Iimpawu zakhe kunye noBuntu bothando, ukuhambelana kunye nobomi
Uyinikele intliziyo yakho kuMfazi weSagittarius…, ngokuqinisekileyo, yayiyinto elula ukuyenza. Akukho mbuzo ukuba unentliziyo entle nomphefumlo… kwaye unoncumo olunokunyibilikisa indoda yentsimbi. Uyayithanda kwaye uyayixabisa imfesane, uvelwano, ubushushu, indalo, kunye nomnqweno wakhe wokuba nesisa kuye nakubani na anokumnceda. Ngapha koko, zonke iimpawu zakhe ezithandekayo zezona zimangalisayo, yimveliso yendalo yeSagittarius.
Iimpawu zakhe kunye nobuntu bothando, ukuhambelana kunye nobomi
Kwinqanaba lomntu, amandla akhe, ukuqina kwakhe, kunye nobuntu bakhe obumangalisayo bukutsalela ngaphakathi, njengoko eli Sagittarius Woman liqhubela phambili kwihlabathi lalo lizama ukuphucula okanye ukuphucula yonke into elijikelezileyo. Olu luhlobo lomfazi ohloniphayo imida yobuqu, nokuba unembono echasene neyakho. Ubuntu bakhe obunesisa kunye nobuntu obuthandekayo bunomtsalane kakhulu, ngamanye amaxesha unqwenela ukuba ungamwola kwaye usongeze ngehlombe lakhe!
Kodwa ngaba ucinga ukuba ungaphatha imfihlelo, yasendle, icala lezilwanyana loMfazi weSagittarius?
Itafile yomfazi weSagittarius
Uyitsale njani iSagittarius Woman
Ukuthandana noMfazi weSagittarius
IJupiter, iplanethi enkulu yokukhula kunye nokwanda, yimpembelelo yokulawula kwi-Sagittarius Woman. Iplanethi ihambelana nobukrelekrele, ukwanda kwengqondo, iinzame zokufunda eziphakamileyo, kunye nokukhula kunye nokwanda kwendalo yokomoya.
Iplanethi ngokwayo ibonisa izenzo zobuqhawe, kulapho ubume besisa seSagittarius bunokubakho. Ufuna ukwenza njengegorha kwabo basweleyo nokuba bangabantu okanye izilwanyana. Impembelelo kaJupiter ivumela uMfazi weSagittarius ukuba azive ekhululekile. Akanangxaki nokuhamba kwendalo kwezinto.
Umfazi weSagittarius Othandweni naseBhedini
Umfazi weSagittarius ugcina ukholo oluqwalaselweyo lokuba zininzi kakhulu izinto ezizayo kwikamva lomntu. Kwicala elingalunganga, nangona kunjalo, oku kunokubangela ukuba uMfazi weSagittarius agqithise iintsikelelo ezincinci ebomini okanye athathe umngcipheko omkhulu kunokuba kunengqiqo, ngakumbi kummandla wemali.
IJupiter ibonelela ngempembelelo yenkululeko, ithemba, ithemba, ukonwaba, kwaye xa iimeko zilungile, inokubolekisa kwimeko enenzuzo yomzamo. Umfazi weSagittarius ubona impembelelo kaJupiter ibonakalisiwe kwindalo yakhe ethembekileyo, enyanisekileyo, ethembekileyo, ethobela umthetho, eyinyani kunye nokunyaniseka.
Ukuba impembelelo yeplanethi ilungile kwitshathi yendalo yomfazi waseSagittarian, uya kuba nobomi obuninzi, obunempilo, obunempumelelo, kodwa ukuba iplanethi iyabandezeleka, amandla ayo ajika angathandeki kwaye kunokubangela incasa yokuziphatha okugabadeleyo okanye okugabadeleyo nokungakhathali, ngakumbi kummandla wenkcitho.
Kumfazi weSagittarius, ukuthandana nomnye umntu kulula kakhulu. Iminqweno yakhe ibaleka ngokunzulu, kwaye unesihogo sexesha lokufihla iimvakalelo zakhe zokwenyani emva kokuba zivele. Ukuzinikela kwakhe ekunyanisekeni kwangoko kungqubana nesenzo sokuzama ukuzibamba kunye nokugcina iimvakalelo zifihliwe.
Ukuba akazichazanga iimvakalelo zakhe kwangoko, unokumfumana ekhubeka malunga nokugcina iimvakalelo zakhe ezifihlakeleyo ekufumaneni. Eyona nto imenzakalisayo, oku yinkcitha xesha kuba iimvakalelo zakhe zothando ziya kuhlala zibonakala nokuba uzama kangakanani ukuzigcina.
Umfazi wakho we-Sagittarius unqwenela ukuthintwa ngabantu kunye nokunxibelelana ngoko ke uya kudinga ingqalelo enkulu ukuze onwabe. Uya kujonga kwiqabane lakhe njengomntu ozisa intsingiselo kubukho bakhe. Ngelixa oku kunokuba ngumbono olungileyo, kuya kufuneka afumane intsingiselo ngaphakathi kwakhe ngaphambi kokonwaba.
Akukho mntu wakha wathi Umfazi weSagittarius unobabalo, kwaye kwigumbi lokulala, anokufumana kulo ulungile. Usenokuzibuza ngamanye amaxesha ukuba indalo iphela idlala ngobuqhetseba kuye ngenjongo yokuhlekisa.
Iimpawu zakhe, ubuntu bakhe, iimpawu zakhe
Umzekelo, unokuzama ukukwenza umtya omnandi ukuze ujije iqatha lakhe. Okanye, usenokuza engxamile ukuza kuwe ukuze ancamise inkanuko yokucinga ngendlela engeyiyo umgama phakathi kwakho nobabini kwaye ekugqibeleni agqibe ukubetha kuwe kunzima ukwanga uluma umlomo wakhe aze atshise izinyo!
Unentloni naye, ke uyakumfumanisa eneentloni ngalo lonke ixesha ukoyika kwakhe kukhokelela kwizenzo zokuxakaniseka: Kodwa le nayo yinto ogqiba ukuyithanda ngaye. Ukuba kukho nantoni na, uya kuba neenkumbulo ezithile ezinomdla kunye nokuhleka okumbalwa okuhle ukuze kusetyenziswe ixesha elizayo. Clumsy okanye hayi, nje ukuba wenze uthando, iimvakalelo zakhe zinamandla njengoko kunjalo ngeseshoni yokwenza uthando.
Sele uyazi ukuba umhlobo wakho we-Sagittarius ungumhlobo, unesisa kakhulu, kwaye ubukrelekrele bakhe kunye nokuhlekisa kungaphaya kweempawu ezinomtsalane. Ungumfazi othanda inkululeko othanda ukuvavanya imida, ukuphonononga kunye nokuhamba.
Umfazi weSagittarius ukwindalo kunye nehlabathi lendalo (nantsi inkcazo kwicala lakhe lezilwanyana kwakhona, ngokufihlakeleyo ebonisa ubukho bayo phantsi komgangatho wokuzola, ukuphola, ukuqokelela, isimilo sakhe esiphucukileyo). Akakrelekrele nje, kodwa uyintanda-bulumko.
Unokubonakala ngathi konke kusentloko yakhe kwaye ngamanye amaxesha ezona ngxoxo zakhe zityebileyo zizityebi ezinzulu, ukuqonda kwefilosofi okusinda kubulumko babantu abadibana nabo. Ukwangumntu onamava, enokuninzi anokukuthetha kwabo bathetha naye okanye kwabo baya kuphulaphula; Ukomelela kwakhe ezingqondweni kunye nomnqweno wokusebenzisa ezo zinto kucaca kwangoko ebomini bakhe.
Umqondiso weSagittarius yicentaur: isiqingatha somntu kunye nesiqingatha sezilwanyana. I-centaur ibonisa ngokugqibeleleyo ubume bobuntombi besetyhini kunye nomzabalazo wangaphakathi ngamanye amaxesha ajongana nawo njengoko ejonga ukulawula ubukrelekrele bokuqala, obokuqala, bokuziphatha kwezilwanyana. Umfazi weSagittarius uqulethe umbono wokuba kukuphila njani kwihlabathi elingenampucuko kungenjalo lisendle kwaye alifundiswanga. Inxalenye yemithetho yakhe yokuqiqa kunye nelinye icandelo lilawula ithuku.
Ugcina icala lakhe lasendle lithambile ngezenzo zokuphilisa, ukufunda, ukufundisa abanye, kunye nokuzama ukubandakanya ukuhamba. Uyayonwabela imisebenzi apho anokujonga khona umhlaba ophucukileyo kwaye anxibelelane nabanye abanengqondo ephezulu. Uhlala enomdla ngonaphakade malunga nehlabathi, ingqondo yakhe ivulekile, kwaye ezi mpawu zibolekisa kumtsalane wakhe omangalisayo.
Indawo yokuhlala yoMfazi weSagittarius yenye yeempawu zakhe zombini. Uqukethe ukulingana okugqibeleleyo kobuhle basendle kunye nobunkunkqele. Unomdla wenkcubeko kunye nezobugcisa ke ngoko uya kuyibona imisebenzi yobugcisa ekhayeni, ezinye ziyimifanekiso yendalo.
Unokufumana imizobo yolwandle, (ukumela ulwandle olunzulu lweemvakalelo azigcinele entliziyweni yakhe), okanye imizobo yehlathi elinomtsalane, imimandla yeentaba kunye namahlathi. Imisebenzi enjalo yobugcisa isebenza njengesikhumbuzo secala lasendle ngaphakathi eliqhubeka lifowuna kuye kwaye eligcina umnqweno oqhubekayo wokunxibelelana nabo ebomini bakhe bonke.
Ayothusi into yokuba umntu afumane iSagittarian Woman efuna ukuhlala kwindawo yesixeko apho umoya ucocekileyo. Ukuxakeka okanye ukuxakeka kukubhenela kwindalo yakhe yasendle. Kodwa, unokumfumana ehlala kwikhaya elincinci elizweni okanye kwindlu yasefama apho aya kuba nehashe elinye okanye nangaphezulu ahlala exesheni lakhe.
Ngokwenyani kwendalo yakhe, kunokwenzeka ukuba uyakonwabela ukukhathalela nokukhwela amahashe. Uya kuyifumana imeko yasekhaya yamkelekile, kunye nokusetyenziswa kwemibala esemhlabeni ukunika uvakalelo lwangaphandle. Kusenokwenzeka ukuba abe nemisebenzi eyahlukeneyo yobugcisa kwihlabathi liphela ekhaya. Iziqwenga zizinto uMfazi weSagittarius aqokelela kuzo zonke iihambo zakhe, nganye inebali elinomdla emva kokuba lifunyenwe njani okanye lithetha ntoni kuye.
Amathanga, amathanga, kunye ne-pelvis zihambelana nomqondiso weSagittarius. Ke, uMfazi weSagittarius unokungena kwiingxaki zamathambo okanye kwimiba enesinqe xa emdala. I-Osteoporosis okanye iOsteopenia inokubonakalisa ingxaki, ke kububulumko kuye ukugcina iliso kwi-calcium kunye namanqanaba eVitamin D. Ukwandisa inani lobisi lobisi ekutyeni kwakhe kubalulekile. Olu phawu lukwalawula inkqubo yesibindi kunye ne-hepatic, ngenxa yoko kunokwenzeka ukuba abaleke kwimicimbi kamva ebomini ebandakanya isibindi esinamafutha okanye eminye imiba yokwetyisa.
Ukuhlala ulungile, uMfazi weSagittarius kufuneka abe kwimeko entle, kwaye oko kuthetha ukuba ngaphandle. Ukuqubha echibini, ukubaleka, ukubaleka, okanye ukukhwela ibhayisekile kunokumnceda azigcine efanelekileyo. Okwangoku, kungcono ukuba ubhenela kwisidingo sakhe sokuba ngaphandle kwindalo kwaye phantsi kwemitha yelanga.
Indawo yokuzivocavoca yendawo inokuthi ingaphaya kakhulu kuye. Okona kulungileyo kukumisela inkqubo esempilweni kwaye unamathele kuyo: Isicwangciso esomeleleyo sisebenza ngcono kuMfazi weSagittarius onokubaleka kwaye alibale ngenye indlela ethintela amandla akhe okwenza izinto ngokufanelekileyo kunye nokunciphisa imveliso yakhe iphela.
Ukuthanda kwakhe ukufundisa kumenza isikhokelo esihle, utitshala, isithethi kunye nomhlohli. Umfazi weSagittarius ugqwesa ekufundeni nakwimathematics, kwaye oku kumenza abe luncedo olufanelekileyo kumfundi odinga uncedo. Ingqondo yakhe ehlala inomdla kunye nobukrelekrele obuphezulu benza ukuba utitshala wakhe abe nakho, ukusukela kumfundisi-ntsapho wokuqala ukuya kwiprofesa yasekholejini, uMfazi weSagittarius ngulowo uthanda indawo apho anokunceda khona abafundi bagqwese ngelixa eqhubeka nokuvuselela ingqondo yakhe.
Ukuba uthatha ixesha lokuba yingcali kulwimi lwesibini (kunye nokuthanda kwakhe ukuhamba emhlabeni imfundo imsebenzela kakuhle). Umfazi weSagittarius unokusebenza njengotoliki wolwimi lwasemzini: Oku kuyamvumela ukuba asebenzise ubukrelekrele bakhe, izakhono zokucinga ngokukhawuleza, izakhono zonxibelelwano, kunye nobuchule bakhe kulwimi.
Umfazi weSagittarius wenza umbulelo omkhulu kugqirha wezilwanyana kuthando lwakhe lwasendle kunye nezilwanyana. Unokusebenza kakuhle efama, okanye angangqina ukuba ungumqeqeshi obalaseleyo wezilwanyana. Nokuba zilungisa izilwanyana ziya kumnika uluvo lokoneliseka. Umnqweno wakhe wokuhamba umenza abe ngumgqatswa omkhulu wokusebenza njengomlindi wenqwelomoya.
NjengeSagittarius, inenekazi lakho elilungileyo likulungele kwaye lizimisele ukusebenza nzima kwimali yalo: Umxholo wokusebenza nzima awumenzi ukuba aphile. Kanye njengokuba eyokufumana imali eziinkozo uzimisele ukuyisebenzisa ngaphandle kokuqhwanyaza iliso okanye ukuziva unetyala; Uziva enelungelo lokumvumela ukuba achithe imali eninzi. Ke, iSagittarius Woman iya kuba 'nokuyisebenzisa okanye ilahlekelwe yiyo' okanye inkolelo yokuba 'ngekhe uyithathe uhambe nayo,' yisebenzise ngoku. Ngaphandle kokuzimisela kwakhe ukuchitha, ngandlela thile uMfazi weSagittarius ugcina iqanda elincinci leentsuku zeemvula.
scorpio indoda libra umfazi ebhedini
Inqanaba lokuzonwabisa kobu budlelwane kufuneka lihlale liphezulu ukuba ufuna ukuqiniseka ukuba akadiki nawe. Cinga ukuba uyakwenza izinto ezininzi ngaphandle, kuba kulapho azive ekhululekile khona. Mmeme kuhambo olude losuku okanye ucwangcise usuku lokuhamba ngenqanawa kumanzi avulekileyo omlambo okufutshane, ichibi, okanye ulwandle. Unomdla kuzo zonke izinto zasendle, kubandakanya neatmosfera yomjikelo. Ke ngoko, imihla, apho uphuma uye khona eklabhini kwaye uvumele icala lakho lasendle libaleke ngokukhululekileyo, alikho kwaphela kumbuzo.
Ukuhlala usebenza kunye nomfazi weSagittarius akusiyo kuphela isitshixo sokumtsala, kodwa kuyisitshixo kwimpumelelo yobudlelwane bexesha elide. Cwangcisa ukuphuma kwe-adventure, iminyhadala yohambo olukhethekileyo, okanye ucwangcise uhambo lwenkampu ngeempelaveki okanye xa ishedyuli yakho yomsebenzi ivumela. Kuya kufuneka ube ngumntu onyanisekileyo ophambili kwaye uthembekile. Ubuncinci, ukuba ucwangcisa ukugcina eli Sagittarius Woman ecaleni kwakho. Ufuna ukunyaniseka kwabo asebenzisana nabo kwaye ulindele ukuba uya kuhlangabezana nemfuno. Ukuba uyamsilela, uya kungqina ngaphandle kokuphoxeka njengoko enethemba elininzi lolwalamano xa ethandana.
Ukuhamba emhlabeni yinto ephambili kuMfazi weSagittarius. Uyakuthanda ukuphonononga kwaye atyhalele ngaphaya kwemida yento ayibiza ngokuba likhaya. Ngaphandle kohambo, iindlela zokuzonwabisa ezithandekayo zingqina ukuba zivumelekile; Unokuzonwabisa ngezinto ezinje ngeenkampu, ukuhamba intaba, kunye neminye imisebenzi yangaphandle. Ungalibali malunga nokuskiya emanzini, ukuhambahamba ngepaki, kunye nemisebenzi yokuntywila enokubonisa ukuba uyayithanda. Ezo zinto zenza ukuba abe nomdla kwaye zondle umoya wakhe onomdla, lonke elixa limvumela ukuba onwabele ngaphandle nangaphandle.
Umfazi weSagittarius akenzi kakuhle xa eziva ethambile kulwalamano. Nantoni na ephazamisa izicwangciso azenzileyo iyamcaphukisa kangangokuba uninzi lwezithuthi okanye iindlela ezindleleni zinokumenza azive esemdeni wokuphambana. Akayi kuphatha ukugxekwa kakuhle kwaphela, kwaye akanakumela umntu obagxeka kakhulu abanye. Kwangokunjalo, ukuba umnika isithembiso kufuneka usigcine, njengoko ibango lakhe lokunyaniseka liza kubangela ukucaphuka. Ukuba uyasilela ukugcina ilizwi lakho. Okokugqibela, isithukuthezi ayisiyonto uMfazi weSagittarius alawula kakuhle kuyo. Isidingo sakhe sokonwaba kunye nokuzonwabisa siya kuba nemvakalelo yokuziva ude afumanise into entsha kwaye ayifezekise loo nto.
Umdlalo ogqwesileyo kumfazi weSagittarius
Umfazi ozelwe phantsi komqondiso weSagittarius ngoyena ubaxabisayo abantu ebomini bakhe; uyakonwabela ukunxibelelana nabanye, kwaye wenza umhlobo owoyikekayo. Unotyekelo lwendalo lokukholisa abanye, kwaye akonwabanga de ade azi ukuba ngeenxa zonke kuye kamnandi. Injongo yakhe ephambili kukuba wonke umntu owaziyo abeke unyawo lwabo phambili kunye nobomi bokuphila njengoyena mntu banokuba nguye.
Unombono wokwenyani onombala kubuntu nakwindalo yomntu. Uyakubona ukulunga kuko konke kwaye ngamanye amaxesha oku kuyamonakalisa; ukulungele ukunika wonke umntu ithuba ebomini bakhe, ngamanye amaxesha uvumela abantu abangaphantsi kobomi bakhe ukuba bamenzakalise okanye bamngcatshe.
Uthando lwakhe kubahlobo bakhe alunamibandela njengothando lwakhe kumalungu osapho. Unyanisekile kwabo asebenzisana nabo, kwaye ke nanjengomntwana, ungena ebubini obuncinane. Abantakwabo bakhula besazi ukuba banodade wabo abanokubuyela kuye ngexesha lesidingo. Umfazi weSagittarius uya kuhlala ekulungele ukwandisa isandla xa befuna.
Umfazi weSagittarius unebhongo kakhulu kusapho lwakhe, kwaye uthwala ikratshi elifanayo xa ekugqibeleni etshata kwaye enabantwana. Ubume bakhe basendle / obunempucuko bumenza abe ngoyena mama ubalaseleyo. Ubakhathalele ngokukhethekileyo abantwana bakhe. Umfazi weSagittarius usebenza njengomzekelo obalaseleyo kubo, abafunda ngokulindelwa kwakhe okukhulu kububele, uthando loluntu kunye nokunyaniseka.
Xa kukho ukuhloniphana phakathi koMfazi weSagittarius kunye neqabane leAries, olu lwalamano lusebenza kakuhle. Ngcono nangakumbi, ukuba banephupha ekwabelwana ngalo okanye iinjongo zokuba bafuna ubudlelwane buye phi, bobabini banokwenza naliphi na iphupha libe yinyani. I-Taurus kunye ne-Sagittarius Woman nayo isebenza kakuhle xa i-Sagittarian inganciphisa isantya esicothayo kunye nendlela yeqabane laseTaurean. Uthando lwabo lomhlaba wendalo kunye nobuhle babanika okuninzi ngokufanayo.
Esinye sezona zibini zibalaseleyo yiSagittarian kunye neqabane leGemini: Zombini zabelana ngomnqweno ofanayo wobukrelekrele, ukufunda, ukuncokola, kunye namaxesha okonwaba. ILibra lolunye uphawu oluhambelanayo oluhamba kakuhle neSagittarius njengoko bobabini bezabalazela ukulingana kwaye bobabini bezentlalontle kwaye bethandeka.
U-Leo kunye noMfazi we-Sagittarius babelana ngothando lokunxulumana, ukuhamba, kunye nokujolisa kwiinjongo, kunye nomnqweno omkhulu wokunandipha bonke ubomi obuzisayo; Kodwa ingxaki inokuvela xa uMfazi weSagittarius ejonge kuLeo ukunika ubomi bakhe intsingiselo. Umlingane ka-Leo, efuna ukuba isithandwa sakhe siphange kwaye simzukise, uhlala engazikhathalele iimfuno zakhe.
I-Capricorn kunye ne-Sagittarius abafazi baphela benza isibini esihle; bobabini banemibono kwaye basebenza kunye njengabaqali-co kuyo nayiphi na into abafuna ukuyenza. Iqabane lika-Aquarius kunye neSagittarius bobabini bafuna ulwazi kunye nokukhanyiselwa, ngenxa yoko ubudlelwane obuluqilima phakathi kwaba babini.
Umxube weSagittarius kunye nePisces uza nezinto ezininzi ezingafaniyo phakathi kwezi zimbini. Kodwa, angayenza isebenze ukuba bayavuma ukuba nesidima omnye komnye kwaye bajolise kulonwabo kunye nokuhleka abanako kunye. Amaqabane eSagittarius kunye namaqabane omhlaza aphelelwe ngamanyathelo okuthandana okanye okuphuhlisa ubudlelwane. Ingathi i-Universe ibangela ukuba baphosane ngokuphindaphindiweyo njengeenqanawa ezidlula ebusuku. Ukuxabisa ukufunda nokufana kwezi mpawu zimbini akwanelanga ukugcina isibini ndawonye 'sithandana.'
Okwangoku, ngelixa kunokwenzeka ukuba uMfazi weSagittarius kunye neVirgo benze ubudlelwane buhlale, kuya kuthatha umsebenzi omninzi ukugcina kunye. Ayisiyo esi sibini siwela kudidi lomphefumlo, okanye esinye esikhokelela kwisiphelo sentsomi. Imfuno yeVirgo yokufezekisa isenokungabonakali kwisifazana seSagittarius esingaphantsi kwexesha elihle.
Zombini zifuna ukunyaniseka, ezinokubenza babe rhabaxa omnye komnye xa benxibelelana. Kwangokunjalo, i-Sagittarius Women ayisebenzi kakuhle kunye neqabane lophawu olunye; Ubudlelwane, ukuba buqale kwaphela bungangqineki kwaye abuyi kuhlala ixesha elide. Ubudlelwane bungangqina, kodwa bobabini banokunyaniseka ngokunyanisekileyo omnye komnye, oko kukhokelela kubunzima obukhulu.
Yintoni enhle ngoMfazi weSagittarius kukuba uyazithanda izipho kunye nezinto ezimangazayo zazo zonke iintlobo. Iincwadi ziya kubhenela kubukrelekrele bakhe obungakholelekiyo, kodwa isibini semidlalo yebhodi enzima inokwenza okufanayo. Ukuthenga amatikiti akhe ohambo apho unokuhamba uye kwindawo oyithandayo yothando yenye indlela yokumenza ancume.
Nantoni na inoveli, entsha, entsha, nokuba intle kwaye iyathandeka inokubeka uncumo ebusweni bayo. Ibhere elitsha eligxothiweyo, isacholo esithandekayo, okanye isipha seentyatyambo zasendle ngokuqinisekileyo siyakukholisa uMfazi weSagittarius. Cinga ngezipho ezikhuthazayo, kwaye uya kuzisa ebomini imfesane yakhe noxabiso analo.
Umqondiso weSagittarius unxulumene neentsomi zamaGrike, enye inxulumene nonyana kaPan uCrotus, isatyr, kwaye enye ilungelelaniswe noChiron the Centaur. Uphawu lweSagittarius lunophawu olubonakala ngathi lutolo kwaye uCrotus ngumqambi wotolo. Ngeli xesha, uChiron kuphela kwe-centaur ehlala ephucukileyo kwaye engakhange awele kwimikhwa yakhe. Kuthiwa ungowokuqala ngeenkwenkwezi, kodwa uphilisa kunye notitshala, ezo zinto zicacile kumfazi weSagittarian.
I-Sagittarius zodiac ihambelana neVili leThamsanqa kunye neKhadi lobushushu kwiTarot. Ikhadi lobushushu lihambelana nokulingana, apho iSagittarius Woman ihlala izabalazela, ngakumbi xa ilinganisa icala lasendle kunye necala layo eliphucukileyo. Ikhadi likwamele zonke izinto ziyalalanisa kwaye ziphakathi.
Ivili leKhadi leThamsanqa liphinda lihlangane nesidingo seSagittarius sokutshintsha rhoqo, ukuzonwabisa kunye nokuhamba phambili. Lo mqondiso uhambelana nenani lesithathu elihambelana nemibono inkululeko, amandla, ukukhula kunye nokwanda. Uphawu luhambelana ne-Solar Plexus chakra, ehambelana neemfuno zeSagittarian zokuziqeqesha rhoqo.
Imihla yeSagittarius: NgoNovemba 23-Disemba 20
Uphawu: UChron iCentaur kunye noCrotus uMtoli
Glyph imvelaphi yegama lokuqala. Utolo lomtoli nesaphetha.
IsiSanskrit: UDhanusa, okuthetha 'iCentaur ngesaphetha kunye notolo.'
Ibinzana eliphambili: 'Ndiyabona.'
Alchemy: Ukuhluthwa okanye ukulungiswa kwento ibe yifom ye-liquid.
Ulawulo lwe-anatomical: Inkqubo ye-hepatic, isibindi, i-pelvis, i-hips, kunye namathanga.
Izilwanyana: Ihashe kunye neNgonyama
Iphupha leArchetype: Umkhosi
Umgangatho wokulinganisa: umbutho, ukugxila, ukugxila
Iintaka: Ukhozi noPikoko
Amatye okuzalwa: I-Topaz eBlue kunye neCitrine
Umthi weCeltic wenyanga: Umdala (Novemba 25 – Disemba 23)
Intsingiselo yoMthi weCeltic: UMfuni
Chakra: Manipura okanye Solar Plexus
Iwele lamaTshayina leZodiac: Impuku
Ukuhambelana: ULeo, uLibra, uAres, kunye no-Aquarius
Amawele amaTshayina amaZodiac amawele: Impuku
indoda ye-taurus kunye ne-aquarius yomfazi ebhedini
Ukuphakanyiswa kwePlanethi: INeptune, iNode yeNingizimu
Ukuwa: ICeres, iNode yeNorth
Izithixo Zabafazi: UArtemis, uDiana, kunye noNephthys
Intyatyambo: I-Aster, iBhalsam, iSage, iDandelion, iNarcissus, kunye neClove
Ukuphilisa Amakristali: I-Moonstone, iChrysocolla, isafire yegolide, i-Amber, i-Amethyst, i-carbuncle, i-topazi yasebukhosini kunye ne-turquoise
Amakhambi: I-Wallflower, ukukhawuleza, i-sage, i-clover, i-pimpernel kunye ne-carnation
Igama elingundoqo: Ubulumko
Izithixo zamadoda: UApollo
Isandi soMculo: B
Inani lokungcangcazela: 3
Oyile: I-Aster, iClove, iNarcissus, iSage kunye neBhalsam
Impembelelo kwiplanethi: Ijupiter
Imibala yokuqala: luhlaza okwesibhakabhaka nemfusa
Imibala yesibini: Imibala yokuwa, imfusa, kunye noblue blue
Isidingo saseprayimari: Ukwanda koLwazi
Ivumba: Imore, isinamon, ijasmine, kunye necarnation
Umbutho wamaxesha: Ukuwa
Imibutho yeTarot Card: Ubushushu kunye nevili lethamsanqa.
Imithi: I-Mulberry, iChestnut, umdiliya, kunye ne-Oak
Abantu abadumileyo: UTaylor Swift, uJulianne Moore; UMariya, uKumkanikazi waseScots, uNicki Minaj, uChristina Aguilera, uCicely Tyson, uAnn Faris noJennifer Connelly.
Ngaba i-virgos kunye neepisces zilungile kunye
Libra indoda ethandana nomfazi onomhlaza
sesiphi isilwanyana esimele amandla nobulumko